We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒီနေ့ သတင်း
မူစလင် ဘာသာဝင်များ ကြေကွဲရတဲ့နေ့ 
ရန်ကုန် ၄၈ လမ်းရှိဆွဒကီယာ ဟာဖိဇ် အာဂုံဆောင်ကျောင်း မီးရှို့ခံရမှု
၁။ ကျောင်းသားများ၏ အင်္ကျီများတွင် တာပင်တိုင် သို့မဟုတ် ရေနံဆီဟုယူဆရသောဆီများ စိုရွှဲနေခြင်း
၂။ မီးလောင်သည်ကို သိသည်နှင့် ထပြေးသော ကျောင်းသားများ ဆီချော်၍လဲခြင်း ။ မီးငြိမ်းသတ်ရန် ရေပုံးယူသော ဆရာ ဆီနင်းမိ၍ချော်လဲခြင်း ။ မီးသတ်ရန်သွားသူများရော အလောင်းဆွဲထုတ်သူများ၏ လက်များနှင့် အ၀တ်အစားများတွင် ဆီများပေကျံခြင်း။ မီးလောင်မှုပြီးဆုံးပြီး လက်များကို စင်အောင်ဆေးပြီးသည့်နောက်တွင်လည်း တာပင်တိုင်အနံ့များ ရနေခြင်း။ (ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လက်ကိုနမ်းခဲ့ရာ ထိုကဲ့သို့အနံ့ရနေပါသည်။ ) ရန်ကုန်ရှိလူများသည် ရေနံဆီမသုးံကြပါ။ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ် ၊ အောက်တိန်း ၊ ဂက်စ် တို့ကိုသာသိပါသည်။ ကျနော် တောမှာနေဖူး၍ ရေနံဆီအနံ့ကိုသိပါသည်။
၃။ မီးသတ်ကားများ အစီး ၂၀ ခန့်လာသော်လည်း မီးသတ်ဥသြမဆွဲခြင်း (ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လာငြိမ်းခြင်း) (မင်္ဂလာဈေးမီးလောင်စဉ်က တစ်ညလုံး မီးလောင်နေရာ ဥသြသံများ အဆက်မပြတ်ကြားနေခဲ့ရသည်။) မီးသတ်ကားတွေ့သူများက လိုက်သွား၍သိရခြင်း။
၄။ ကျောင်း၏လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုးများ တွင်မည်သည့် ညှော်နံ့မှမရှိခြင်း။ ရဲက ကျောင်းတွင်အသုံးပြုသော မီးအားမြှင့်စက် (Transformer) ကိုသိမ်းဆည်းသွားခြင်း။
၅။ RFA သတင်းထောက်က သတင်းရယူရာတွင် မီးလောင်မှုနှင့် မီးငြိမ်းသတ်မှုဖြစ်စဉ်များကို မေးမြန်းနေစဉ် မီးငြိမ်းသတ်သော ဆရာကမိမိ၏အ၀တ်အစားများတွင် ဆီများပေနေကြောင်းနှင့် ဆီများမှာ အနံ့ပင်မပျောက်သေးကြောင်း ပြောသဖြင့် သတင်းထောက်ကိုယ်တိုင် လက်ကို နမ်းကြည့်လိုက်သော်လည်း ထိုအချိန်တွင် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုကို ရပ်တန့်လိုက်ခြင်း။ Eleven Media ကသတင်းထုတ်ပြန်ရာတွင် ထို ဆီကိစ္စလုံးဝမပါရှိခြင်း။
၆။ အထပ်ခိုးထဲတွင် ကျောင်းသားများရှိနေသေးသည်ဟုပြောသော်လည်း မီးသတ်သမားများက သေသူမရှိဟုတွင်တွင်ငြင်းခြင်း။ ရပ်ကွက်သားက မီးလောင်သေဆုံးနေသော ကျောင်းသားများကို ကိုယ်တိုင် အထပ်ခိုးပေါ်သို့တက်ရောက်သွားသောအခါမှ မီးလောင်သေဆုံးထားသော ကျောင်းသားများကိုထပ်မံဆွဲထုတ်နိုင်ခြင်း။
၇။ ကျောင်းရှေ့တွင် ဂျစ်ကားတစ်စီးရပ်ထားရာ လာ၍မောင်းယူမည့်သူမရှိသဖြင့် လူအင်အားဖြင့်ရွှေ့လိုက်ရခြင်း။
၈။ အခင်းမဖြစ်ပွားမီ ပေါက်ကွဲသံကြားရခြင်း။
၉။ ၀ါယာရှော့ကြောင့်လောင်တာ ဟူသောသတင်းသည် တစ်မုဟုတ်ချင်းပျံ့နှံ့သွားခြင်း။
၁၀ ။ ၀ါယာရှော့ကြောင့်လောင်လျှင် အဘယ့်ကြောင့် ရေနံဆီများရောက်လာသနည်။ ရေနံဆီသုံးမီးစက်ရှိပါသလော။ ၀ါယာညှော်နံ့ကို ဘေးရှိအိမ်များက မရလေသလော။
အထက်ပါအကြောင်းများကြောင့် သာမန်မီးလောင်မှုမဟုတ်ပဲ ရှို့မီးဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပေသည်။ အထက်ပါအကြောင်းများကြောင့် သာမန်မီးလောင်မှုမဟုတ်ပဲ ရှို့မီးဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပေသည်။
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကို အမေရိကန်ရေတပ်ရွေ့ လျားနေရာယူပြီ
ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မှူအပါအ၀င် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို အသေအချာစောင့်ကြည့် ဖို့စစ်သဘောင်္တစင်းနဲ့ ရေပြင်အခြေစိုက် ရေဒါစခန်းတခုကို မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းနဲ့ အနီးဆုံးနေရာကို ပြောငိးရွေ့ နေရာယူလိုက်ပြီလို့ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ရှိသူတဦးက ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်
အမေရိကန် ဖျက်သဘောင်္ USS John S. McCain နဲ့ 
SBX-1 ရေဒါစခန်းတို့ ကို အခုလို နေရာရွေ့ လိုက်တာဟာ အမေရိကန်ဘက်က ပထမဆုံး ရေတပ်ဘက်ဆိုင်ရာ
လှုပ်ရှားမှုလို့ CNN သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။
ဖျက်သဘောင်္ USS McCain ဟာဒုးကျည်တွေကို
ဟန့်တားပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ မြောက်ကိုရီးယာားဘက်က အဏုမြူလက်နက်အပါအ၀င် စစ်ရေးခြိမ်းခြောက်မှူတွေ သတင်းပတ်အတော်အကြာအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ အပြီးမှာ အခုလို အမေရိကန်ဘက်ကတုံပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကခြိမ်းခြောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ ပေမယ့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ တောင်ကိုရီးယားဟာ ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင်မှူကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယာဘက်က ရန်စလာတဲ့ လုပ်ရပ်မှနိသမျှကို နိုင်ငံရေးအရမစဉ်းစားဘဲ တုံ့ ပြန်သွားမယ်လို့ တောင်ကိုရီးယားကလည်းသတိပေးထားပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ မှာ ခွေးခြောက်ခွေး တွေ လှုပ်ရှားနေပြီ
၉၆၉ အကြမ်းဖက် ဂိုဏ်းသားများ ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြည်သူ့ရဲ ဆိုင်ကယ်များဖြင့် လှုပ်ရှားနေ
သတင်း နှင့် ဓါတ်ပုံ - ကိုမင်းဇေယျာ
ရန်ကုန် - မတ်လ ၃၁
ရန်ကုန်မြို့တွင် ၉၆၉ အကြမ်းဖက် ဂိုဏ်းသား အချို့သည် ပြည်သူ့ရဲ ဆိုင်ကယ်များကို အသုံးပြုပြီး ၉၆၉ တရားခွေများ စတေကာများ လိုက်လံ ဝေငှ လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
လွန်ခဲ့သည် မတ်လ၂၉ ရက် သောကြာနေ့က ရန်ကုန်မြို့ မြယာကုန်းလမ်း ဗလီ အရှေ့ရှိ ရွှေလဘက်ရည်ဆိုင် အရှေ့တွင် ရပ်ထားသော မော်တော်ဆိုင်ကယ် အားမောင်းနှင် သူမှာ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးမဟုတ်ပဲ ဒေါပုံဖက်က လူမိုက်အောင်ကိုဦး ဆိုသူဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်သည် သာကေတမြို့နယ် တစ်ဝိုက် မွတ်စလင်မ် မုန်းတီးရေး ၀ါဒဖြန့်သူများအနက်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သာကေတ အစ္စလာမ် စာသင်ကျောင်း ဖျက်ဆီးမှုတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း မျက်မြင်များက သတင်းပေးပို့ ပါသည်။
အဆိုပါကဲ့သို့ နိုင်ငံတော် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအား တာဝန်ယူထားသော ပြည်သူရဲ များ ၏ ဆိုင်ကယ်များတွင် အစွန်းရောက်အဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ်၏ စတေကာများကို ကပ်ထားခြင်းကြောင့် ပြည်သူများ စိုးရိမ်မှုများ တိုးပွားလာခဲ့ပြီး ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ အပေါ်အယုံအကြည်များ ပိုမိုလျော့နည်း လာနိုင်ကြောင်း၊ ပြည်သူ့ရဲ တပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် အုပ်စု တစ်စု၏ အသုံးချခံ မဖြစ်သင့်ကြောင်းနိုင်ငံသားအားလုံး၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်များကို အကာအကွယ် ပေးရမည့် အဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် ပိုမိုပီပြင်လာစေရေးအတွက် အထူးလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း မြယာကုန်းလမ်းရှိ
`အခု ဒီမှာ ဒုက္ခသည်တွေ ရောက်နေတယ်လေ ... ဒီရဲဆိုင်ကယ်ကြီးက ၉၆၉ တံဆိပ်ကြီးတပ်ပြီး အရှေ့တည့်တည့်က လာရပ်ထားတယ် .... သာကေတက ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေက ပြောပြတယ် ဒီလူက သာကေတလူမိုက်တဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ရဲဆိုင်ကယ်ကြီးစီးလာလဲ မသိဘူး .... ဒီလိုဆိုယင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သူ့ကို အားကိုးရမလဲ ... ရဲက လည်း ၉၆၉ တံဆိပ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်တွေကို လာဖျက်တဲ့ သူတွေကလဲ ဒီလူတွေပဲ ဆိုတော့ ..... ဒုက္ခပဲပေါ့
Sauk Yuu MOE THEE. Any how MOE THEE. Rumor King MOE THEE. Communism MOE THEE. Enemy of Democracy MOE THEE. Moss MOE THEE. Beggar MOE THEE.
ငါလိုးမသားမိုးသီး စောက်ရူးလူလိမ် တိုင်းပြည်ကို မွတ်တွေ လက်ထဲရောက်အောင် မွတ်တွေ ကို ဖာထေးပြော ကို့ဘာသာကို စော်ကားချင်တဲ့ ကောင် ခွေးမျိုး ခွေးအဖွဲ့စည်း ဘယ်တော့မှ မြန်မာကို ပြန်မလာနဲ့